फ्रिजरमा म्याकबुक प्रो Martech Zone
फ्रिजरमा म्याकबुक प्रो
बुधवार, मई 2, 2007 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
तपाईंले यो सही सुन्नुभयो! मैले हालसालै मेरो म्याकबुकप्रोसँग समस्या भोगिरहेको छु जहाँ म यो फेरि सुरु गर्न सक्दिन। यो बस त्यहाँ बस्छ र केहि गर्दैन। यो धेरै निराश छ। मैले शंका गर्न शुरू गरें कि यो एक थर्मोस्टेट मुद्दा हुन सक्छ त्यसैले मैले एक परीक्षण गरें - मैले यसलाई मेरो फ्रिजरमा अड्याएँ। १० मिनेट पछि मैले यसलाई लिएँ र यो अहिले बुट भयो… कुनै समस्या छैन।
मैले यो केही चोटि परीक्षण गरें र पुष्टि भयो कि त्यो मुद्दा हो। अरू कसैलाई यो समस्या आएको छ? मेरो कामले नयाँ अर्डर गरेको छ र मैले हिजो राति मेरा फाईलहरू स्थानान्तरण गर्न कोसिस गरें (त्यसैले तपाईंले पोष्ट देख्नुभएन) तर म यसलाई काममा लिन सक्दिन। निराशाजनक बारेमा कुरा गर्नुहोस्!
त्यसैले आज म मेरो सुपर-डुपर-म्याक-प्रयोगकर्ता, बिलबाट हात लिन लागिरहेको छु कि, यदि हामी फाईलहरू स्थानान्तरण गर्न सक्दछौं र यस बिरामी म्याकबुक प्रोलाई डाक्टरमा लैजाने छौं भने।
केटा कावासाकीबाट ब्लगि E प्रचार
कुनै पार्किङ छैन
मई 2, 2007 मा 9: 14 एएम
माफ गर्नुहोस् कि डग, मैले हालै मेरो म्याकबुकमा फ्यान कन्ट्रोल प्रोग्राम स्थापना गरें किनकि मलाई यो कत्ति तातो लाग्यो मनपर्दैन, मैले यसलाई सेट गरेको छु ताकि यसले प्रशंसकलाई 3500 1800००rpm भन्दा तल कहिल्यै छोड्दैन। यो १65००rpm मा निष्क्रिय हुन प्रयोग गर्‍यो तर प्रशंसक र्याम्प गर्न सुरु हुनुभन्दा पहिले CPU लाई XNUMX XNUMXC भन्दा माथि जान दिनुहोस्, त्यो निकै उच्च देखिन्थ्यो, तर सफ्टवेयरले ओभरराइड गर्न अनुमति दिन्छ। मलाई लाग्छ कि यसलाई smcFanControl भनियो। तर मलाई लाग्दैन कि यसले तपाईंको समस्या समाधान गर्दछ
तपाईं ल्यापटपको साथ फ्रिजमा बस बस्न सक्नुहुन्छ? बियरमा द्रुत पहुँच?
मई 2, 2007 मा 10: 38 एएम
मैले त्यो शट पनि दिएँ (मैले एसएमसी फ्यान नियन्त्रण प्रयोग गरेँ) तर त्यसले सहयोग गरेन। म्याकबुकप्रो वास्तवमा एकदम तातो भइरहेको थिएन ... यो सोच्दछ कि जब तपाइँ सुरु गर्नुहुन्छ। जबसम्म मैले कहिल्यै रिबुट गर्दैन, यो ठीक छ। 🙂
मई 2, 2007 मा 12: 04 PM
डग, मैले सोचें कि म्याक पदहरूको पूरै विचार विन्डोज आधारित मेसिनको हो कि तपाईंले सबै समय रिबुट गर्नुपर्दैन?
के तपाईंले याद गर्नुभयो मैले म्याक पदहरू पीसी भनेँ? किन? दुबै व्यक्तिगत कम्प्युटर हुन्
मई 2, 2007 मा 12: 18 PM
... मलाई लाग्छ तपाईलाई थाँहा छ कि तपाईले आफ्नो म्याक फायरवायर मोडमा सुरु गर्न सक्नुहुन्छ बुटको बखत T कुञ्जी होल्ड गरेर। फाईलहरूको सजिलो स्थानान्तरण ...
मई 2, 2007 मा 12: 48 PM
मैले पूरै रात त्यो foo को कोशिश गरेर बिताए! यो १ घण्टा १ 1 मिनेटमा रोकिन्छ र कहिले जारी हुँदैन। आज बिहान म उठेँ र यो अझै १ घण्टा १ 15 मिनेटमा भयो! अरे!
म प्रयास गर्न जाँदैछु कार्बन कप क्लोन अर्को!
मई 3, 2007 मा 2: 35 एएम
तपाईको म्याक बुकमा हार्ड डिस्कको समस्या भएको जस्तो लाग्छ।
के तपाईंले दौडन कोशिस गर्नुभयो? डिस्क वारियोर? राम्रो प्रोग्राम छ यदि तपाईंसँग म्याक छ (म अक्सर सोच्दछु किन उनीहरू एप्पलले किन खरीद गरेका छैनन्…)
तर पर्खनुहोस् - के तपाईं भाग्नु भएको छ Applejack अझै - त्यो दिन बचत गर्न सक्दछ, र फ्रीवेयर हो।
शुभकामना - बल तपाई संग हुन सक्छ।
मई 2, 2007 मा 11: 08 PM
म्याकहरू प्रयोग गर्न यति गाह्रो छ कि तपाईं फाइलहरू एकबाट अर्कोमा सार्न सक्नुहुन्न? वाह। त्यो बेकार छ!
मई 3, 2007 मा 7: 23 एएम
मलाई लाग्दैन कि उनीहरू कुनै पनि प्रयोग गर्न गाह्रो छन् - तर तिनीहरू पक्कै पनि राम्रोसँग काम गर्दैनन् जब तिनीहरू बिरामी छन् मेरो जस्तो! मँ आज एप्पल स्टोरमा छु कि तिनीहरूले के फेला पार्न सक्छन् भनेर हेर्न।